Senator Cabdi Qeybdiid oo sheegay in Galmudug ay u baahantahay qof mideeya – Kalfadhi
Senator Cabdi Qeybdiid oo sheegay in Galmudug ay u baahantahay qof mideeya
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, oo maanta khudbad ka jeedinayay munaasada lagu qabtay magaalada Muqdishu, ayaa ka hadlay xaalada doorasho ee ka taagan maamulka Galmudug.
Xildhibaanno labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa maanta ka qeyb-gallay munaasabad uu musharaxnimadiisa xilka madaxweyne ee Galmudug ku shaacinayay Cabdi Cabdullaahi Axmed (Cabdi Dheere), taas oo ka dhacday Hotel Jazeera.
Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, ayaa sheegay in Galmudug ay maanta u baahantahay cid gacanta qabata oo istaajisa, oo lugaheeda ku istaajisa, isla markaana mideysa.
“Markii aan arkay Galmudug sida ay tahay, markii aan soo maray dhulka, waxaa aan is iri, ninkii maanta yiraahda waxaan ahay qofkii ka saari lahaa dhibaatada ay ku jirto, wuu iga geesiyeysanyahay hambalyo ayaan leenahay”, ayuu yiri Senatorka.
Waxaa horraantii bishan si rasmi ah magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad gobaleedka Galmudug ka furmay shirka dib-u-heshiisiinta beelaha dega deegaannada Galmudug iyo dhismaha maamul dadka reer Galmudug u wada dhan yihiin.
Xafaladda furitaanka shirka waxaana shirka ka soo qeyb galay ra’isul wasaaraha xukuumadda federaalka ah Xasan Cali Kheyre, guddoomiye ku xigeenka 1aad ee aqalka sare Abshir Axmed, xildhibaanno labada gole ee Baarlamaanka federaalka iyo Ergo mataleysa beelaha daga Galmudug oo gaaraya ilaa 500 ergo.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo sheegay in Qabiil aan Dowlad lagu dhisi karin
Guddiga joogtada ah ee Baarlamanka Puntland oo ansixiyay wax ka bedelka xeerka maalgashiga